I-VR's Ride Tide Ekushicileleni nasekumaketheni | Martech Zone
I-VR's Rising Tide ku-Publishing and Marketing
NgoLwesithathu, Januwari 3, 2018 UDave Hodgson
Kusukela ekuqaleni kokumaketha kwanamuhla, imikhiqizo iqonde ukuthi ukwakha ukuxhumana nabasebenzisi bokugcina kuyisisekelo secebo lokumaketha eliphumelelayo - ukudala okuthile okuvusa imizwa noma okunikeze okuhlangenwe nakho kaningi kunomqondo ohlala njalo.
Njengoba abathengisi beya ngokuya bephendukela kumaqhinga edijithali neselula, ikhono lokuxhumana nabasebenzisi bokugcina ngendlela egxilile selinciphile. Kodwa-ke, isithembiso seqiniso elingokoqobo (i-VR) njengesipiliyoni sokucwiliswa siseduze nokuphuma kwabashicileli, abasakazi nabathengisi. Eqinisweni, abanye babadlali abakhulu kunabo bonke esikhaleni semidiya badonsela kulobu buchwepheshe ngaphambi kokuba abathengi abaningi babe nehedisethi yabo ye-VR. Ngenkathi iningi labantu baseMelika lingakawamukeli umqondo wokuhlola imihlaba ebonakalayo, abezindaba bagxila isikhathi nomzamo wokuthi ingafakwa kanjani i-VR kucebo labo lokulethwa kokuqukethwe esikhathini esizayo - futhi kuwukuhlakanipha ukuthi abathengisi benze okufanayo.
Kungani? Njengoba abashicileli bezindaba nabakhangisi befuna indlela elandelayo yokungena phambi kwamakhasimende abo futhi baxhumane nabo ezingeni elijulile, iyiphi indawo engcono yokuhlangana nokuyala ukunakwa kwabo kunaphakathi kwepulatifomu egcwele ngokuphelele efinyeleleka kusuka kunoma iyiphi indawo? Iqiniso langempela liyimpendulo.
Kusukela emicimbini yezemidlalo kuya kokuqukethwe komagazini, i-VR tech ikulungele ukushintsha ngokuyisisekelo indlela abathengi abathola ngayo imidiya, futhi yingakho abamemezeli nabathengisi begxumela ebhodini ngaphambi kokutholwa kwabantu abaningi:
Ukukhuliswa Kwezindaba Okuthuthukisiwe
Izitolo ezifana ne- Associated Press futhi I-New York Times bakhiqiza okuqukethwe kwe-VR okuhlanganiswe nezindaba ezicindezelayo, eziqhutshwa imizwa. Ilensi yeqiniso elibonakalayo isondeza abathengi esenzweni esithinta inhliziyo noma esifudumeza inhliziyo, sinikeze isipiliyoni semidiya esisebenza ku-cinematographic.
Abakhangisi bomkhiqizo bangahlola ukuthi bangaba kanjani yingxenye yalezi zindaba, njengabaxhasi noma njengezingxenye ezicwilizayo zendaba uqobo. Izindaba ezingokomzwelo yizo eziqhuba ukubandakanyeka okuphezulu kakhulu kwezibukeli, ukuyala amasheya ezokuxhumana nabantu, ithrafikhi nokuphawula okuqala ukusebenza ngegciwane futhi kugcina abantu bebuya bezothola okunye.
Iqhubeka nokuqukethwe kwedijithali
With Amaphesenti angama-84 abantu abadala baseMelika usebenzisa i-Intanethi kanye Amaphesenti angama-68 aphethe i-smartphone, okuqukethwe kwedijithali kusetshenziswa ngezinga elinolaka. Abathengi bafuna ukufinyelela kokuqukethwe kwedijithali futhi abashicileli badinga ukufeza isidingo somthengi sokwanelisa ngokushesha. Njengoba abantu abaningi belindele okuqukethwe yidijithali ezandleni zabo, bazophinde babheke okulandelayo… okuyilapho i-VR isebenza khona.
I-VR ithathela okuqukethwe kwedijithali ezingeni elilandelayo futhi izokwamukelwa okokuqala ngu- abantu bedijithali owakhula ngobuchwepheshe be-smartphone nemithombo yezokuxhumana. Nge-VR, laba bathengi bangabuka okuqukethwe kumuntu wokuqala, babe yingxenye yesenzo futhi - kwezinye izimo - babandakanyeke ohlotsheni lwesimo "sokukhetha i-adventure yakho".
Cabanga nje uma ungangena "endabeni" bese ukhetha ukuthi ngokombono kabani futhi ukubheka ngakuphi lokho okuqukethwe? I-VR ikwenza lokhu kube yiqiniso futhi abasakazi banesifiso esikhulukazi kulesi sici se-VR, bacwaninga ukuthi bangasisebenzisa kanjani embonini yezemidlalo yezigidigidi zamaRandi.
Umlandeli wezemidlalo ubizwa ngokushiseka ngenxa yesizathu - uyisisekelo sokwethembeka, nesinomdlandla wababukeli abahlala bezilolongela ukubuka amaqembu abawathandayo ku-TV naku-inthanethi. Kuthiwani uma laba balandeli bengathola umdlalo enkundleni, bewubuke ngamehlo we-quarterback lapho besecaleni, nasezihlalweni ezisejalidini lama-50 lapho bezivikela? Ukuphayona ubuchwepheshe be-VR ivumela abalandeli ukuthi babone imidlalo ngezindlela ezingenakwenzeka ngethelevishini yendabuko.
Esikhundleni sokuhlangenwe nakho komdlalo noma omunye umcimbi wokusakaza ovela kuma-engeli ambalwa anqunywe kusengaphambili, i-VR ivula ithuba lokuthi ababukeli benze ngezifiso okuqukethwe kwabo - futhi nabakhangisi benza okufanayo. Okuhlangenwe nakho komkhiqizo kungashumeka ngaphakathi komhlaba we-VR, kunikeze ababukeli ithuba lokuzikhethela kulokho abafuna ukukubona kubakhangisi. Omile? Umthengisi eziteshini uza ngezikhathi ezithile, anikeze uhlobo oluthile lwesiphuzo futhi afake ukubonakala komkhiqizo.
I-VR idlala ekufuneni kokubili okuqukethwe kwesikhathi sangempela nokuntywiliselwa - izinto ezimbili ezamukelwe ngabomdabu bedijithali njengamazinga emidiya namuhla. Imicimbi ebukhoma, enxanxathela eyodwa inika ithuba lokwehluka kwamacala amathathu, okomuntu wokuqala futhi i-VR ihola phambili. Abashicileli beSavvy nabakhangisi bangagxumela emkhunjini ukuze bagibele i-VR ekhuphuka, noma babe sengozini yokucwila phansi kolwandle olungapheli lokuqukethwe okujwayelekile kwedijithali.
I-Zeiss VR One Plus ye-iPhone 6 Series I-Zeiss VR One Plus ye-iPhone 7 Series
Ukudalulwa: Asikakhokhelwa nge-athikili, kepha sabelana ngezixhumanisi zethu ze-Amazon Affiliate to I-headset ye-VR yokuwina umklomelo kaZeiss.
Tags: okuqukethwe kwedijithaliabantu bedijithaliokuqukethwe okugxilisaiPhone 6iphone 7PublishingUkuxoxa ngezindabaesingokoqobo virtualI-headset yangempela yeqinisovri-vr ekhandavr eyodwavr ihedisethi eyodwazeisszeiss vr one plus
UDave Hodgson ungumqondisi wezentengiso nokusabalalisa waseNyakatho Melika Amadivayisi we-Zeiss Multimedia, iqembu elingaphakathi kwesigaba semikhiqizo yabathengi seZeiss, abenzi belensi yekhamera, izibonakude kanye nobubanzi. Amadivayisi we-Multimedia afaka i-headset ye-Zeiss VR One namadivayisi agqokekayo angakusasa anamalensi akhethekile.
ICeltra AdCreator: Ukuboniswa kwedijithali nokukhangisa ngevidiyo i-CMP